Tag: landing page solutions | Martech Zone
Tag: landing page solutions
I-B2B Lead Generation Manifesto
NgeSonto, Okthoba 21, 2012 NgoMgqibelo, Okthoba 20, 2012 Douglas Karr
Ukukhiqizwa kokuhweba kwezebhizinisi (B2B) ngokwakha okuqukethwe kuyisu elihle. Ukuthuthukisa, ukusabalalisa kanye nokukhuthaza okuqukethwe ku-inthanethi kungakhulisa igunya lakho futhi kwakhe ubuhlobo nabathengi bakho abazoba khona. I-Unbounce - ipulatifomu yekhasi lokufika lakho - ithuthukise le infographic, I-B2B Lead Generation Manifesto yokuchaza inqubo ephumelelayo yokwenziwa kokuhola kwe-B2B ngokusebenzisa ukumaketha kokuqukethwe. I-infographic inikeza izibalo ezifanele ezisekela ukwenziwa kokuqukethwe ngokubhuloga nokubhala ama-ebook, ukuhola
Ingabe ama-Blogger kufanele alungise amaphutha awo?
NgoMgqibelo, July 19, 2008 NgoLwesihlanu, ngoJuni 19, i-2015 Douglas Karr
Kunengxoxo enhle ngamaCranky Geeks adlulele kuTWIT kuleli sonto esondele futhi engiyithandayo ngenhlonipho yami ngezintatheli. Ama-Blogger akuzona izintatheli ngomqondo wendabuko wegama kepha siyizintatheli uma sibukwa ngombono wabathengi. Ukulungiswa kubalulekile futhi kufanele kubhekwane nakho, kepha kuya ngephutha elenziwe. Okuthunyelwe okudala kusaphila 'emiphumeleni yenjini yokusesha futhi kukhona